Mpanolo-tsaina media sosialy tokoa ve ianao? | Martech Zone
Mpanolo-tsaina media sosialy tokoa ve ianao?
Ny omaly alina dia nanana fotoana tsy nampino aho handeha hihaona sy hihaino mpandresy Indianapolis 500 intelo, Helio Castroneves. Izaho dia vahinin'ny mpampiofana mpiara-miasa sy mpanazatra fampisehoana David Gorsage, izay nanontany raha hanome vaovao farany amin'ny media sosialy mandritra ny hetsika aho. Rehefa nandamina tenifototra aho, nanaraka ireo mpanohana, ary nahafantatra ireo VIP tao amin'ilay efitrano, dia niondrika mangingina ny matihanina amin'ny hazakazaka iray ary nanontany hoe:
Ianao ve tena mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy?
Ny fomba nanontaniany azy dia nampiambina ahy… toy ny hoe manontany izy tena zavatra izany? Ratsy kokoa ny fihetsiko. Somary sosotra aho. Tsy hoe nanontany tena izy hoe ny haino aman-jery sosialy dia fantsom-barotra azo heverina… izay noheveriny fa anisan'ireo aho ireo mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy. Nampahafantariko azy fa consultant marketing manana fiaviana ao amin'ny haino aman-jery nentin-drazana sy nomerika nomerika aho, miaraka am-pitiavana ny hampitombo ny vokatra ho an'ny orinasa B2B sy SaaS.
Nizara tantara iray momba ny fomba nanakaraman'ny orinasany consultant media sosialy taona vitsy lasa izay izy noho ireo resabe rehetra nitranga tamin'ny media sosialy. Nilaza izy fa nanao asa mahatalanjona tao amin'ny media sosialy ilay olona, ​​saingy tsy nisy vokany ara-barotra mendrika izany. Nilaza izy fa navelan'izy ireo handeha ilay olona tamin'ny farany, satria ho sosotra izy ireo amin'ny fangatahana fanamarinana ny ROI amin'ilay mpampita vaovao. Nanontany tena izy raha nisy izany.
Tsy maintsy nitandrina tsara aho tamin'ny valinteniko. Mino ny marketing amin'ny media sosialy aho, saingy tsy izany my mankanesa any amin'ny fantsona rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny paikady fahazoana aho - search is. Na dia azo inoana aza fa noho ireo indostria iarahako miasa io, misy ihany koa ny olana momba ny fampiharana sy ny fahaizako. Tiako ny mizara sy miditra amin'ny alàlan'ny media sosialy isan'andro, saingy tsy mijery azy io ho toy ny fantsom-pandraisana - na dia ao amin'ny orinasako aza.
Izany dia nilaza fa fantatro ireo mpanolotsaina media sosialy maro izay manao fampielezan-kevitra azo refesina, manangana fahatsiarovan-tena ary manao asa tsara mihitsy amin'ny fahazoana mpanjifa amin'ny Internet. Nataoko mazava tsara tamin'ilay lehilahy niresaka tamiko aho - saingy tsy dia vahaolana ho an'ny orinasa rehetra izany. Heveriko fa ny haino aman-jery sosialy dia afaka mitondra lanja ho an'ny fikambanana ivelan'ny fahazoana mivantana koa:
Fanaraha-maso ny marikao sy ny mpifaninana aminao an-tserasera hahafantarana ireo olana sy fotoana mety ao anatin'ny indostriao. Misy fampahalalana marobe izay tsy maintsy nananan'ireo orinasa nanombanana ny statistikan'ny fanadihadiana sy fandatsaham-bato mba hahazoana miditra. Matetika izy io dia misy amin'ny ankamaroan'ny sehatra sosialy. Tianay Agorapulse - izay ambasadaoron'ny marika.
Fahombiazan'ny mpanjifa hery iray hafa amin'ny media sosialy. Raha manana ekipa fahombiazan'ny mpanjifa mamaly sy manampy ianao izay afaka mahita vahaolana amin'ny mpanjifa ho avy sy efa misy, ny media sosialy dia mety ho fantsona lehibe hananganana fahatokisana sy hitazomana ny mpanjifa.
fanentanana paikady henjana handrefesana ny ROI, saingy asa lehibe ampiasain'ny tetikady media sosialy mafy orina. Na izany aza, iray hafa izay mila talenta. Tsy mora ny mandre ny feon'ny marikao ary miparitaka eo amin'ny besinimaro fa mety mahomby. Amin'ny fotoana iray, raha manimba anao ny fifaninanana ataonao… mila mahay mandrefy na mahafantatra ny fahafantarana fa safidy ny orinasanao na tsia.
Trust tombontsoa iray hafa avy amin'ny media sosialy izay sarotra refesina. Afaka manao fikarohana amin'ny Internet aho ary mahita vokatra na serivisy tiako hovidiana… fa avy eo dia hifindra any amin'ny vondrona LinkedIn na vondrona matihanina Facebook aho ary hanontany ny hevitr'izy ireo. Raha mahita negatives be dia be aho any dia hifindra amin'ny safidy manaraka aho. Ny fananana mpankafy marobe mizara taonina momba ny halehiben'ny orinasanao amin'ny Internet dia mety tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana irery, fa afaka manampy.
Nampahafantariko azy fa, na dia tsy mpanolo-tsaina media sosialy manontolo andro aza aho dia tsy niraharaha ny media sosialy na oviana na oviana tamin'ny mpanjifa. Matetika aho mampiditra fitaovana hamoahana ho azy sy hizarana fampahalalana kalitao an-tserasera amin'ny mpihaino, ary hanangana rafitra fanehoan-kevitra izay azon'ireo orinasa hamaly. Nataoko izany satria tsy afaka nanamarina ny vidin'ny mpanolo-tsaina media sosialy manontolo andro aho, saingy mbola tsapan'ireo mpanjifako ny soa azo avy amin'ny media sosialy.
Ary nanoro hevitra azy aho fa mety tsy nahita consultant mety hanampy azy ireo ny orinasany. Heveriko fa ny mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy lehibe dia afaka manamarina ny fandaniana amin'ity fitaovana ity… ary raha tsy afaka izy ireo, dia hilaza ny marina momba ny fomba hampiasana azy ireo izy ireo raha tsy mandany vola amin'ny manam-pahaizana kendrena.
Amin'ny hazakazaka, izay misy kely dia kely ny fisarahana eo amin'ny mpankafy sy ny mpamily, heveriko fa marketing amin'ny haino aman-jery sosialy tokony mahasoa amin'ny alàlan'ny fanaporofoana ny ROI. Ireo mpankafy hazakazaka dia manana fifandraisana akaiky amin'ireo marika manohana ny mpamiliny - tsy toy ny fanatanjahan-tena rehetra. Ny fizarana ireo marika ireo amin'ny alàlan'ny media sosialy, raha manome varavarana mankamin'ny ain'ny mpamily dia fotoana iray tsy mampino. Miaraha mandrindra amin'ireo mpanohana anao ary refeso ny fiheverana sy ny fividianan'ireo mpankafy! Raha niresaka taminy dia toa tsy izany ny nifantohan'ny consultant-dry zareo. Fotoana tsy ampoizina angamba.
Mihevitra aho fa nanova ny sainy momba ilay fantsona… ary rehefa nanao izany aho dia nanova ny hevitro momba io teny io consultant amin'ny media sosialy ihany koa.
Tags: fahazoanafanentananaSerivisy ho an'ny mpanjifafahombiazan'ny mpanjifafihazonanaROIserivisy ho an'ny mpanjifa sosialyconsultant amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialy roi
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fandaharam-potoana ara-dalàna amin'ny paositra media sosialy
Inona ny atao hoe Virtual Reality?